MRI kachasị ala dị ala na onye nrụpụta nnukwu ọrịa strok na ụlọ ọrụ | CSJ
Stroke bụ nnukwu ọrịa ụbụrụ ụbụrụ. Ọ bụ otu ọrịa nke na -ebute mmebi anụ ahụ ụbụrụ n'ihi mmebi mberede nke arịa ọbara na ụbụrụ ma ọ bụ ọbara enweghị ike ịbanye n'ime ụbụrụ n'ihi mkpọchi akwara, gụnyere ischemic na strok hemorrhagic. Ọnọdụ ọrịa strok ischemic dị elu karịa ọrịa strok, na -aza 60% ruo 70% nke ọnụọgụ ọrịa strok niile. Ọnụọgụgụ ọrịa strok na -egbu egbu dị elu.
Nchọpụta ahụ gosiri na ọrịa strok obodo na ime obodo jikọtara ọnụ abụrụla ihe mbụ butere ọnwụ na China na ihe butere nkwarụ n'etiti ndị okenye China. Stroke nwere njirimara oke ọrịa, ịnwụ anwụ na nkwarụ. Ụdị ọrịa strok dị iche iche nwere ụzọ ọgwụgwọ dị iche iche.
Sistemụ onyonyo resonance nke ala-ala dị ala nke ejiri mee nyocha na nleba anya nke nnukwu ọrịa strok na-egbo mkpa nyocha ụlọ ọgwụ na nnukwu na nnukwu nnukwu usoro, yana ọgwụgwọ mgbaama n'oge na-azọpụta ndụ dị oke ọnụ ahịa nke ọtụtụ ndị ọrịa.
Ezigbo oge, awa 24, nleba anya nwere ọgụgụ isi ogologo oge na-enweghị nkwụsị nke mmepe nke ndị ọrịa strok, na-enye ndị dọkịta data ka ukwuu.
Ọ bụghị naanị na ọ ga-emezu ihe achọrọ maka nyocha ahụike, mana enwere ike iji ya na nyocha sayensị iji nweta nghọta miri emi banyere usoro na usoro mmepe nke ọrịa strok.
Usoro a bụ ihe eji echebe onwe ya, obere mkpagharị na ọmarịcha, na-eme ka usoro ahụ kwekọọ na gburugburu ụlọ ọgwụ ọ bụla, dịka ngalaba ICU, ngalaba mberede, ngalaba onyonyo, wdg.
Sistemụ a pere mpe ma dịkwa ọkụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa n'ụgbọ ala mberede, na -agba ọsọ megide oge iji zọpụta ndụ.
Nye usoro nhazi na nhazi nkeonwe.
Nke gara aga: Sistemụ mkpanaka MRI
Osote: Ogwe ọkụ eletrik dị ala na-agbachi agbachi
Nnukwu Homogeneity na Stability Benchtop NMR
Sistemụ Radiotherapy MRI na -eduzi
Sistemụ Njikọ Ulo Igwe